ပိုက်ပြင်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းကြေးဝါတံတောင်ဆစ် - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > metallic Fittings > ပိုက်ပြင်ပစ္စည်းများအတွက်သောကြေးဝါတံတောင်ဆစ်
Thea သောကြေးဝါအဘို့တယောက်ထိပ်တန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထက်ပိုမို5နှစ်ကျွမ်းကျင်သူအတွေ့အကြုံကိုအတူfittings.Âတစ်ပေါင်းလိုက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကောင်းသောအများပြည်သူ praise.We နှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်း 20 မှတင်ပို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသစ်သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစျခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကရှိတယ် ထို့အပြင်customersâ€™ရေးဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာအညီထုတ်လုပ်ရန်နှင့်, ဖောက်သည်လိုဂိုနှင့်ထုပ်ပိုး, စသည်တို့ကိုဒီဇိုင်းကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့ကိုသငျသညျ us.The ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရစေခြင်းငှါ, 24 နာရီအွန်လိုင်းအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့ဖို့ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်သင့်လူအများကလေးစားကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customers.Warmly တို့နှင့်လည်းအလွန်ရေပန်းစားသည်။
တစ်ခုကတံတောင်ဆစ်ဦးတည်ချက်တစ်ခုပြောင်းလဲမှု, များသောအားဖြင့်တစ်ဦး90Â°သို့မဟုတ်45Â°ထောင့်ခွင့်ပြုပါရန်ပိုက် (သို့မဟုတ် Tube) ၏နှစ်ခုအလျားအကြား installed လျက်ရှိ၏ 22.5Âတံတောင်ဆစ်ချိုးလည်းမရရှိနိုင်ကြသည်°။ စွန်းကိုပေါင်းလိုက်သောတင်းပါးဂဟေဆော်, (များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီး) အတွက်မြင့်, ဒါမှမဟုတ် socketed နိုင်ပါသည်။ စွန်းတိုင်အောင်အရွယ်အစားကွာခြားသောအခါ, တစ်လျှော့ချ (သို့မဟုတ်လျှော့ချ) တံတောင်ဆစ်အဖြစ်လူသိများသည်။ 90 ကွေး & quote ;, & quote;; 90 ELL & quote ကိုလည်း & quote အဖြစ်လူသိများတစ်ဦးက90Âºတံတောင်ဆစ်, သို့မဟုတ် & quote; လေးပုံတစ်ပုံကွေး & quote ;, ပလပ်စတစ်, ကြေးနီ, ချပစ်သံ, သံမဏိ, ခဲဖို့အလွယ်တကူအလေးထားနှင့်စွန်ခံ-သံမဏိညှပ်နှင့်အတူရော်ဘာတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများဆီလီကွန်, ရော်ဘာဒြပ်ပေါင်းများ, သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်နိုင်လွန်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဆို့ရှင်, ရေပန့်များနှင့်ကုန်းပတ်ရေနုတ်မြောင်းမှရေပိုက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ 45 ကွေး & quote; ကိုလည်း & quote အဖြစ်လူသိများတစ်ဦးက45Âºတံတောင်ဆစ်, သို့မဟုတ် & quote; 45 ELL & quote ;, လေ့ရေပေးဝေရေးအဆောက်အဦးများ, အစားအစာ, ဓာတုနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပိုက်လိုင်းကွန်ယက်များ, လေအေးပေးစက်ပိုက်လိုင်းများ, စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဥယျာဉ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စက်ရုံပိုက်အတွက်အသုံးပြုသည်။
(1/2 & quote; DN15; 3/4 & quote; DN20; 1 & quote; DN25; 1 1/4 & quote; DN32; 1 1/2 & quote; DN40;2& quote; DN50 ဘုံအသုံးပြုမှု၌ရှိကြ၏) ဆိပ်ကမ်းကိုရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့ချ
Din, ANSI, ASTM, JIS ဘီ, GB ကို, က ISO, IFI Non-စံ
ကနေ -20 တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 110 မှတစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အလွိုင်းသံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, ကြေးဝါ, ကြေးဝါနှင့်စသည်တို့ကို
(အရောင်များ၏အမျိုးမျိုးသော) အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, dacromet, သွပ်ချထားတဲ့, nickle အလွိုင်း polishing, ချထားတဲ့
စံပို့ကုန်အထုပ်, ပုံး, Wood က pallet သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အဖြစ်
30 ရက်ကြိုတင်% T / T, 70% ချိန်ခွင်လျှာတင်ပို့မတိုင်မီ
ပိုက်ပြင်ပစ္စည်းများအတွက်သောကြေးဝါတံတောင်ဆစ်၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
1. အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု strickly: ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး, Mach အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, In-လာမယ့်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး, စုဝေးအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း, ယိုစိမ့် Tese နှင့်နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေး shiping မတိုင်မီ
2. ထုတ်လုပ်မှု Strickly နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစီမံခန့်ခွဲမှု
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း 3. အာမခံအရည်အသွေးမြင့်
5. နျ Standard ထုပ်ပိုးသို့မဟုတ် cusotmized
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး:စံပို့ကုန်အထုပ်, ပုံး, Wood က pallet သို့မဟုတ်customerâ€™်လိုအပ်ချက်များအဖြစ်။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:ပင်လယ်ပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်ဖောက်သည်အညီ€™ s ကိုâလိုအပ်ချက်များ။
hot Tags:: တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းပိုက်ပြင်ပစ္စည်း, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality ကြေးဝါတံတောင်ဆစ်
တန်းတူ hex ဌာနမှူး Threaded ကြေးဝါကို Cap
ကြေးဝါကို Chrome ကိုပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings
Metric Thread နှင့်အတူကြေးဝါကို Compression ကို Tee